Monday February 18, 2019 - 20:09:13 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Wararka ka imaanaya gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in dagaallo xooggan ay markale dib uga qarxeen degmada Jalalaqsi oo ay xoog ku heystaan ciidamada shisheeyaha AMISOM.
Dagaalka oo ahaa mid saacado badan qaatay ayaa billaawday maanta barqadii kadib markii ciidamada Jabuuti ee Jalalaqsi ku sugan ay isku dayeen in ay dhaq dhaqaaqyo melleteri ka sameeyeen duleedka degmada.
Xoogag aad u hubeysan oo katirsan Shabaabul Mujaahidiin ayaa weerar culus kala hortagay ciidamada Jabuuti, ilo wareedyo ayaa warbaahinta islaamiga ah u sheegay in dagaal mudo socday kadib ciidamada Jabuuti lagu qasbay in ay dib ugu laabtaan halkii ay kasoo duuleen.
Dagaalkan ayaa yimid saacado kadib markii ciidamada Al Shabaab ay shalay weerar madaafiic ah ku qaadeen saldhigga ciidamada Jabuuti weerarkaas oo sababay dhimashada ugu yaraan 5 askari.
Illaa iyo hadda lama oga khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaalladii xooganaa ee maanta ka dhacay deegaan katirsan gobolka Hiiraan balse diyaarad nuuca qumaatiga ukacda ah ayaa gelinkii dambe ee maanta soo caga dhigatay garoonka diyaaradaha Jalalqsi waxayna halkaas ka daabushay Meydad iyo dhaawacyo.